Statement on Burmese military regime’s 2010 election
We are ethnic national communities originally from Burma. Our dream of
equality, self-determination and democracy has never been materialized after
gaining independence from the British in 1948. All the people of Burma
have suffered under military regime in various forms since 1962.
Again the military regime, State Peace and Development Council has drafted
the 2008 constitution and planned to hold an election in 2010. Within the
regime’s constitution, there is neither independent judiciary nor
decentralization of administrative power. The military will remain above the
law without any balance of power within the administration of new
government that will be elected in 2010. The election is merely designed to
provide legitimacy to the existing military dictatorship
Under the name of democratic system, the following credential points are
missing during the process of democratization by the State Peace and
Development Council (SPDC)
• The military regime has consistently ignored the result of 1990
• The military regime’s7Steps Road Map and its constitution process
are not inclusive nor does it reflect the spirit of national reconciliation.
• The military regime has ignored constitution recommendations made
by ethnic nationalities
• The military regime’s self-drafted 2008 constitution is not based on
democratic principles and federal system
We will not be able to accept the SPDC’s road map and the 2010 election
unless the following change are made or improved
• Prove positive changes by releasing all political prisoners
• Start nation-wide ceasefire and stop military activities in all region
to facilitate political consultation and reconciliation process
• Review the 2008 constitution which does not reflect the wish of
We would like to see very positive changes to the SPDC by engaging
genuine political dialogue with Burmese democratic forces and ethnic
nationalities as the first and foremost task before the 2010 election.
Therefore, we call on international community especially United Nations,
the Canadian government, neighboring countries of Burma and the ASEAN
to ensure the SPDC keep its promises and leading to genuine political
1. Vancouver Shan Community
2. Karenni State Youth (Canada)
3. Vancouver Chin Community
4. Kachin Organization of Canada (Vancouver)
5. Karen Canadian Community (KCC)
6. Mon Community of Canada
7. Rakhine Community of Canada
8. Zo National Union (ZNU)
Mahn Kyaw Swe (519) 434-0139
Saion Nammao (604) 598-9192
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 4/20/20090အကြံပြုခြင်း
ပဒိုမန်းရှားက သူ့စကားကို အဆုံးသတ်လိုက်သည်။ မနက်ဖြန်က ….နှစ်သစ်။ ၁၉၉၇ ခုနှစ် နှစ်သစ်၏ နေ့သစ်…..။ လေက မသော့….။ ငြိမ်နေ၏။ လေမနှော့သဖြင့် ကန်ရေပြင်သည် လှိုင်းကြက်ခွပ်တို့ မထ….။ မှန်သားပြင်ကဲ့သို့ ….။ ငြိမ်သက်မှုက …လေဖိအားနည်း ရပ်ဝန်းငယ်လေးတခု ပမာအလား….။
KNU ခေါင်းဆောင်များ သူ့ အဖေ မရှိသည့် နောက် အားလုံးကိုချုပ်ကိုင်ထားပြီးလက်ဝါးကြီးအုပ် ထား ဟု စောနေစိုးမြ အင်တာဗျုး တွင်ပြော(ဗီဒီယို)
April 20, 2009 · ၂၀ ဧပြီ ရန်ကုန်၊ ၊Freedom News Group
ထော့ကော့ကိုးတွင် သွားရောက်အခြေစိုက် သော ကွယ်လွန်သူ ဗိုလ်ချုပ်မြ ၏ သားဖြစ်သူ စောနေစိုးမြ က မြန်မာ့ရုပ်မြင်သံကြား နှင့် မြ၀တီ ကို၎င်း ၏အမြင် နှင့် သူ့ အဖေချမှတ်ထားသော မူများကိုလက်ရှိ KNU ခေါင်းဆောင်များက လိုက်နာမှုမရှိကြောင်းထော့ကော့ကိုး
တွင် ပြောနေ စဉ်။
ဧပြီလ(၂၀) ရက်၊ ၂၀၀၉
နအဖဟာ ၁၉၉၆-၉၇ ခုနှစ်များမှာ တပ်မတော် (ကြည်း၊ ရေ၊ လေ) ပူးပေါင်းစစ်ဆင်ရေး လေ့ကျင့်ခန်းကြီးနဲ့ တပ်မတော် (ကြည်း၊ လေ) (ခြေလျင်၊ တင့်) ပူးပေါင်းစစ်ဆင်ရေး လေ့ကျင့်ခန်းကြီးတွေကို ထိပ်တန်းလျှို့ဝှက်ချက်အဆင့်နဲ့ ဆင်နွှဲခဲ့ပြီးတဲ့နောက် တပ်မ (၂၂/ ၄၄/ ၅၅/ ၇၇/ ၈၈) တပ်မ ငါးခုစလုံးအား နောက်တန်းဌာနချုပ်များသို့ မပြန်ခိုင်းတော့ဘဲ ကရင်ပြည်နယ် စစ်ဆင်ရေးသို့ ထိုးသွင်းကာ တောက်လျှောက် ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီနောက် ကြာအင်းဆိပ်ကြီး နယ်မြေတ၀ိုက် စစ်ဆင်ရေး တာဝန်ယူရတဲ့ တပ်မ (၂၂) တပ်မမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ် မောင်မောင်သိန်းထံ ကေအန်ယူမှ တိုက်ခိုက်ရေး ထူးချွန်တဲ့ တပ်မဟာ (၆) လက်အောက်ခံ တပ်ရင်း (၁၆) ရင်းမှူး ဒု-ဗိုလ်မှူးကြီး စောသမူဟဲက လက်နက်ချလိုကြောင်း ဆက်သွယ်သတင်းပို့လာပါတယ်။ ဗိုလ်သန်းရွှေက ဒီနေရာမှာ ကေအန်ယူကို စိတ်ဓာတ်ရေးရာ ထိခိုက်ကျဆင်းအောင် လုပ်ရမယ်ဆိုကာ စိတ်ဓာတ်စစ်ဆင်ရေး နည်းဗျူဟာ အပါအ၀င် အောက်လမ်းနည်းကိုပါ ရောမွှေစီစဉ်ခိုင်းပါတော့တယ်။
ဗိုလ်သန်းရွှေဟာ သဘောထားတင်းမာတဲ့ ဗိုလ်မောင်အေး အပါအ၀င် ဗိုလ်မြင့်အောင်နဲ့ ဝန်ကြီးများအပြင် အတွင်းရေးမှူး (၁) ဗိုလ်ခင်ညွန့်ကိုပါ စောသမူဟဲအား သွားရောက်တွေ့ဆုံ လက်ခံဖို့ ညွှန်ကြားခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဗိုလ်မောင်အေးနဲ့ ဗိုလ်ခင်ညွန့်တို့ နှစ်ဦးဟာ စစ်သက်တမ်းတလျှောက်မှာ မတွဲစဖူး အတွဲထူးပြီးတော့ စောသမူဟဲရဲ့ လက်နက်ချ အခမ်းအနားကို လုပ်ခဲ့ကြရပါတယ်။
အဲဒီ လက်နက်ချအခမ်းအနားမှာ ကေအန်ယူအလံကို မြေမှာ ဗိုလ်မောင်အေးရဲ့  ဖိနပ်နဲ့ ချနင်းဖို့ အောက်လမ်း အစီအမံ တွေပါ လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ ဆက်လက်ပြီး စိတ်ဓာတ်စစ်ဆင်ရေးအနေနဲ့ လုပ်ခိုင်းရာမှာ နာမည်ကြီး စစ်ဗိုလ် သီချင်းရေး ဆရာ ဗိုလ်မှူးမြသန်းစံ (ကကပြည်) အား ငြိမ်းချမ်းရေးပန်းခင်းသီချင်းအား အမြန်ရေးသား စပ်ဆိုခိုင်းကာ မြန်မာ့အသံနဲ့ ရုပ်မြင်သံကြားက ထုတ်လွှင့်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ စစ်အစိုးရဲ့ ပျင်းရိဖွယ်ကောင်းလှပြီး လက်တွေ့မရှိတဲ့ မူဝါဒတွေ ဦးတည်ချက်တွေကို ပြည်သူတွေ နားဝင်ချိုအောင် ဆွဲဆောင်နိုင်အောင် အနုပညာပီသစွာ စပ်ဆိုပေးနိုင်တဲ့ စစ်သားတပိုင်း၊ အနုပညာရှင်တပိုင်း ပါရမီရှင် ဗိုလ်မှူးမြသန်းစံဟာ တပ်က ထွက်လိုက်ရတာမို့ နှမြောစရာ ကောင်းလှပါတယ်။ တပ်က ထွက်လိုက်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းကလည်း သူ့အား အမိန့်အာဏာတွေနဲ့ ဇွတ်တရွတ် လုပ်ခိုင်းနေတာမို့ အနုပညာဟာ အာဏာနဲ့ အမိန့်ပေးပြီး ချက်ချင်းရေးခိုင်းလို့ ရတာမျိုး မဟုတ်ဘဲ ဈာန်ဝင်မှ လုပ်ရတာဖြစ်ကြောင်း တုံ့ပြန်လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ကို အချိန်ပေးကာ သံစဉ်နဲ့စာသား ချောမွေ့အောင်ထည့်ပြီးမှ လုပ်ပေးနိုင်မယ်လို့ အာဏာရှင်တွေကို ပြန်ပြောခဲ့တဲ့အတွက် အချေအတင်ဖြစ်ခဲ့ရာက ပြန်လည်တုံ့ပြန်ခဲ့ကာ တပ်မှ ထွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ စစ်အာဏာ ရှင်တွေဟာ သူတို့ လိုချင်ပြီဆိုရင် ပြည်သူကို မဆိုထားနဲ့ မိမိလက်အောက်ခံ အရာရှိတွေကိုတောင် နိုင်ထက် စီးနင်း အမိန့်နဲ့ အာဏာသုံးကာ နှိပ်ကွပ်တာကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီတုန်းက လိုအပ်တာတွေ ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ လွှတ်လိုက်တဲ့ လယ်ဆည်ဝန်ကြီး ဗိုလ်မြင့်အောင်ကလည်း ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့က ရှေ့တန်းနယ်မြေ ကျိုက်ဒုံစခန်းမှာ ဖင်ပူအောင် မနေနိုင်ဘဲ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးကို ပြီးစလွယ် လုပ်ပေးကာ ပြန်ပြေးသွားခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ တပ်မ (၄၄) တပ်မမှူးဘ၀နဲ့ ကရင်ပြည်နယ်ရဲ့  အကျိုးကျေးဇူးကြောင့် ရာထူးတက်သွားခဲ့တာကိုတောင် ဘ၀မေ့သွားကာ ကရင်ဒေသရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေးကို ဂရုမစိုက်တာကတော့ တရားကျစရာ ကောင်းလှပါတယ်။
နအဖဟာ သမူဟဲလို လက်နက်ချပြီး ၀င်ရောက်လာတာမျိုးကိုလည်း စနစ်တကျ လုံခြုံရေး စီမံမှုနဲ့ ကာကွယ် စောင့်ရှောက်မှု မပေးဘဲ ပစ်ထားတာကြောင့် သူ့ရဲ့မိသားစု ပစ်သတ်ခံရတာမျိုး ဖြစ်ပွားခဲ့တာမို့ တိုင်းရင်းသား တွေအနေနဲ့ အထူးသတိထားသင့်လှပါတယ်။ နအဖအပေါ် အားကိုးတကြီး လက်နက်ချပြီး ၀င်ရောက်လာတဲ့ လက်နက်ကိုင် တိုင်းရင်းသားတွေဟာ လက်နက်မရှိရင် အနိုင်ကျင့်ခံရမယ့်အပြင် လုပ်ကြံပစ်သတ်ခံရတဲ့ ဒီလိုဖြစ်စဉ်မျိုးတွေ မလွဲမသွေ တနေ့ ကြုံတွေ့ရမှာကိုတော့ သတိပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကေအန်ယူက သစ်တောရေးရာဝန်ကြီး ဖဒိုအောင်ဆန်းကတော့ သစ်ကိစ္စပြဿနာ တက်လာလို့ ဘားအံမှာရှိတဲ့ ထောက်လှမ်းရေး တပ် (၂၅) က တပ်မှူး ဗိုလ်မှူးခင်မောင်ကြည်မှ တဆင့် လက်နက်ချဖို့ ဆက်သွယ်ကာ နအဖထံ ၀င်ရောက်သွားခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဖဒိုအောင်ဆန်းဟာ နအဖရဲ့ အရိုးအရင်း ချကျွေးထားတဲ့ ပါမစ်တွေကို လောဘဇောတက်ပြီး ဈေးကစားရာ ပွဲစားပေါင်းစုံ ရှုပ်ထွေးလာပြီး ပွဲစားတချို့က မကျေနပ်ဘဲ တိုင်ကြားလာ တာကြောင့် သူကိုယ်တိုင်လာမှ ပစ္စည်းထုတ်ပေးမယ်လို့ သက်ဆိုင်ရာက ခေါ်ပြောရတဲ့အထိ ရှုပ်ထွေးမှု ဖြစ်ခဲ့ ပါတယ်။ ပွဲစားကုလားတဦးဆိုရင် စရန်ငွေပေးထားလျက်နဲ့ ဖဒိုအောင်ဆန်းဟာ တခြားမှာ ဒီထက်ဈေးကောင်းရလို့ ကတိဖျက်ပြီး ပါမစ် မပေးတော့တာမို့ သွားရောက်တောင်းဆိုခဲ့ရာ ဖဒိုအောင်ဆန်းက သေနတ်ပြပြီး ခြိမ်းခြောက်ခဲ့ ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
ဖဒိုအောင်ဆန်းဟာ အမျိုးသားညီလာခံ တက်နေစဉ်မှာလည်း နိုင်ငံရေးတွင် စိတ်ပါဝင်စားမှု လုံးဝမရှိသူ ဖြစ်ပါ တယ်။ ဒါ့အပြင် သွားချင်ရာသွားကာ ညီလာခံမှ ရုတ်တရက် နေအိမ်သို့ ပြန်သွားသလို၊ တည်းခိုဆောင်ကို ထောက်ပံ့စရ်ိတ်လာပေးတဲ့ လွှတ်တော်ရုံးက မိန်းမပျို နှစ်ဦးအား သူ့အပြော “အားဆေး” ခေါ် တိုင်းရင်းဆေးတွေကို ပါးစပ်ထဲ အတင်းခွံ့ကျွေးလို ကျွေးပြီး ပေါက်တတ်ကရ နေသူဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။
နအဖဟာ နိုင်ငံရေးအရ အသုံးချလိုတဲ့အခါမှာတော့ ဖဒိုအောင်ဆန်းကို သတင်းထောက်တွေနဲ့ သတင်းဌာနတွေ ရှေ့မှာ နအဖကောင်းကြောင်း ရှင်းလင်းပြောဆိုခိုင်းတာမို့ လူတတ်ကြီးလုပ်ပြီး နိုင်ငံရေး ပါရဂူသဖွယ် ကင်မရာရှေ့မှာ နအဖအလိုကျ ကားရားကားရား လုပ်ပြပုံကဖြင့် သနားစရာ ကောင်းလှပါတယ်။ တကယ်တော့ ဖဒိုအောင်ဆန်းဟာ နအဖရဲ့  ကြိုးဆွဲရာကို ကနေရရှာတဲ့ မျောက်ကြီးသဖွယ် အသုံးတော် ခံနေရတဲ့ဘ၀ကို ရောက်မှန်းမသိ ရောက်နေသူသာ ဖြစ်ပါတယ်။ နအဖဟာ သမူဟဲနဲ့ ဖဒိုအောင်ဆန်းကို ကြည့်ပြီး တိုင်းရင်းသားတွေ အပေါ်မှာ အထင်သေး နှိမ့်ချဆက်ဆံမှုတွေနဲ့ အကြွင်းမဲ့ လက်နက်ချခိုင်းရေးကိုသာ အားသန်နေပါတယ်။
နအဖဟာ ကေအန်ယူကို အင်အားချည့်နဲ့စေဖို့သာ ကြံရွယ်ပြီး ကေအန်ယူဗဟိုနဲ့ တိုက်ရိုက် မဆွေးနွေးသေးဘဲ တပ်မဟာမှူးတွေကို တိုက်ရိုက် Deal လုပ်ကာ ဖဲ့ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ ကေအန်ယူအင်အားချည့်နဲ့ပြီး ဘေးကျပ်နံကျပ်ဖြစ်အောင် ဖန်တီးပြီးမှ ကေအန်ယူဗဟိုကို အထက်စီးနဲ့ ဆွေးနွေးမယ်လို့ နအဖက ကြံစည်ထားခဲ့ပါတယ်။ ကေအန်ယူတပ်မဟာ မှူးတွေ ဖြစ်ကြတဲ့ ဗိုလ်အော်လီဗါနဲ့ ဗိုလ်ရွှေဆိုင်းတို့က သစ္စာရှိကြလို့ နအဖရဲ့  သွေးခွဲမှုအား ငြင်းဆန်ခဲ့ကြပြီး တပ်မဟာ (၇) မှူး ဗိုလ်ထိန်မောင်ကိုတော့ နအဖ ဗိုလ်မြတ်ထွန်းဦးက ထပ်မံ ဖဲ့ထုတ်စည်းရုံးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဗိုလ်ထိန်မောင် နအဖကို အညံ့ခံပူးပေါင်းရာမှာ တပ်မဟာတခုလုံး မပါဘဲ အင်အားအနည်းငယ်သာရှိလို့ နအဖက ဘ၀င်မကျကာ ပစ်ထားရာ လိုက်ပါသွားသူ တချို့တောင် နောင်တရပြီး ပြန်ပြေးခဲ့ကြပါတယ်။ ဗိုလ်ထိန်မောင်လည်း မထူးဇာတ်ခင်းပြီး နအဖ အလိုကျ ကနေရပါတယ်။
တကယ်တော့ နအဖဟာ တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ တန်းတူအခွင့်အရေးမျိုး ပေးဖို့ နေနေသာသာ ဘာတခုမှ တင်ပြပိုင်ခွင့် မရှိတဲ့ ညီလာခံအတုအယောင်က တဖက်သတ် ဥပဒေနဲ့အတူ ဗြောင်ကျကျ အနိုင်ကျင့် ယူထားတဲ့ စစ်ဗိုလ်တမတ်သားရယ်၊ ကြံ့ဖွံ့ရယ်၊ စစ်အစိုးရ လက်ဝေခံ ကုန်သည်စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်ရယ်၊ ဌာနဆိုင်ရာ အသွင်ပြောင်း စစ်ဗိုလ်လူထွက်ရယ် စတဲ့ ကိုယ်စားလှယ်အတုတွေနဲ့သာ လူထုကိုလိမ်ညာကာ မျက်လှည့်ပွဲကြီးကို ကျင်းပပါတော့မယ်။
ဒါကြောင့် လူနည်းစု ကောင်းစားရေးသာရှိပြီး တတိုင်းပြည်လုံး ကျွန်ဖြစ်တာထက် ဆိုးဝါးအုံးမယ့် နအဖရဲ့  ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို ဆန့်ကျင်ကြဖို့ တိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးမှာ လုံးဝ တာဝန်ရှိပါတယ်။ အာဏာသိမ်းထားတဲ့ ဒီစစ်အာဏာရှင် လက်ထက်မှာတောင် ဒီလောက် နွံနစ်နေရင် ရွေးကောက်ပွဲ ပြီးရင်တော့ ပေးထားတဲ့ မရှိမဲ့ ရှိမဲ့ အခွင့်အရေးလေးကို ပြန်သိမ်းလိုက်မှာ သေချာသလောက်ရှိတယ်ဆိုတာ ယနေ့ အပစ်ရပ် ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့တွေ အားလုံးသိထားဖို့ တင်ပြလိုက်ရပါတယ် ခင်ဗျား။
(april 20 , 2009)
လွန်ခဲ့တဲ့ (၇) နှစ်လောက်က ကြပ်ပြေးဒေသက ကြံစိုက်ပျိုးခဲ့တဲ့ ဧက (၁) ထောင်ဆိုတဲ့ နေရာဒေသရဲ့ ပတ်ပတ်လည်မှာ ၀န်ထမ်းအဆောင်တွေ စဆောက်လုပ်ခဲ့တာကို ထိုစဉ်က အများပြည်သူတွေ သိပ်မသိခဲ့ကြသလို အောက်ခြေက ထားရာနေစေရာသွားရတဲ့ ကျန်ဝန်ထမ်းတွေကလည်း ဂဃနဏ မသိခဲ့ကြ။
ဒီနေရာတွေကို ကျုပ်တို့ သွားရတော့မယ်ဆိုတဲ့ သတင်းသဲ့သဲ့ လေးကြားခဲ့ပြီး ပိာုပြော ဒီပြောနဲ့ ကြားခဲ့ရတဲ့ ကောလာပာလတွေ နဲ့ပဲ အချိန်ကုန်ရင်း ၂၀၀၅ ခုနှစ်အတွင်း ချဉ်းနင်းဝင် ရောက်လာ တော့ ကျုပ်တို့ ၀န်ထမ်းတွေအားလုံး တယောက်မကျန် စစ်ထောက်ချုပ်ရုံးက မော်တော်ယာဉ်တန်းနဲ့ အကြောင်းမရှာဘဲ နောက်ဆုံးပြောင်းလာခဲ့ကြရတာ၂၀၀၇ ခုနှစ်လယ်အထိပဲ။ မူလလစာ သုံးလေးထောင်ကနေ သုံးလေးသောင်းကျော် တိုးထားတာကလည်း မကြာသေးတော့ ဒင်းတို့ရဲ့ အဓမ္မအကြံနောက် ကောက်ကောက်ပါအောင် လိုက်ခဲ့ကြရတယ်။
အဲဒီနောက်မှာတော့ ကျုပ်တို့ဝန်ထမ်းတွေ အများစုရဲ့ဘ၀က သူတို့လက်ခုပ်ထဲက ရေလိုဖြစ်အောင် ဌာနတွေအလိုက် ၀န်မင်းကြီးအမျိုးစုံစုံက နည်းလမ်းအဖုံဖုံသုံးပြီး ခြိမ်းခြောက်အုပ်ချုပ်နည်းတသွယ်၊ အလုပ်မပာုတ်တဲ့ အလုပ်တွေ နေ့မီးညမီး ထိန်ထိန်ညီးနဲ့ ဒင်းတို့ နားလည်အောင်ရှင်းပြဖို့ လုပ်ရတဲ့ အလုပ်တွေနဲ့ ရှုပ်အောင်လုပ်ထားတာကတမျိုး၊ ၀န်ပိပြီးအနားမရအောင် တမင်ဖန်တီးခိုင်းထားတဲ့ အလုပ်တွေနဲ့ မအိပ်ရ၊ မနားရ၊ မအားရအောင် ခိုင်းထားတဲ့နည်းနဲ့တဖုံ၊ စတဲ့ညစ်နည်းမျိုးစုံသုံးထားလို့ ဒီကြပ်ပြေးအကျဉ်းထောင်လို အထားခံရတဲ့ ရုံးဝန်ထမ်းတွေရဲ့ဘ၀။
အတိတ်က ဇာတ်လမ်းကို ပြန်ပြောင်းပြီး မှန်ပြောင်းထိုးကြည့်ရင် မြင်ရမှာက ၁၉၇၄ အလုပ်သမား အရေးအခင်း ကာလ၊ ဒီအရေးအခင်း ဘာကြောင့် ဖြစ်ခဲ့ရသလဲဆိုတဲ့အမေးကို အဖြေရှာတဲ့အခါ ထိုစဉ်က စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင်ရဲ့ အစီရင်ခံစာအရ၊ အရပ်ဘက်မှာ အုပ်ချုပ်ရေးအားနည်းညံ့ဖျင်းလို့ အရေးအခင်း ဒီလိုဖြစ်ရတာဆိုတဲ့ အချက်နဲ့ မင်းတို့ကို စိတ်မချတော့ဘူး။ ငါတို့ကို ဇောက်ထိုးမိုးမျှော်ဖြစ်အောင် လုပ်နိုင်တဲ့ မြှောက်ထိုးပင့်ကော်တွေ လို့ စွပ်စွဲရှာဖွေဖော်ထုတ် အလုပ်တွေဖြုတ်ခဲ့၊ ထောင်ချခဲ့။ အာဏာစက်ပြင်းပြင်း ချက်ချင်းသက်ရောက်အောင် အစီအမံတွေနဲ့ ဒလစပ်ချမှတ်ခဲ့တာ။
ဤအကြောင်းအချက်များကြောင့်၊ နယ်ဘက်ရုံးဌာနတွေ၊ စက်ရုံအလုပ်ရုံတွေရဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးဘက်တွေကို ဒင်းတို့ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းကနေ ဘာညာမဆိုင် ကင်ပေတိုင်လို အုပ်ချုပ်ဖို့ တပ်ထဲမှာ အနေကြာလို့ မေဂျာဆိုတဲ့သူ (၄၀) ကျော်ကို အရပ်ဘက်ပြောင်း၊ လက်ခမောင်း စခတ်ပြီး အုပ်ချုပ်ခဲ့ပေမယ့် (၈၈) မှာ ကျုပ်တို့က လက်မခံတော့ ဘူးဆိုတာ ကမ္ဘာမှာသက်သေထူပြခဲ့ပြီးပြီ။ (၈၈) မှာလို ၀န်ထမ်းတွေပါတဲ့ ဇာတ်လမ်း၊ နောက်ထပ်တစခန်း မထစေရဘူးလို့ သွားလေသူ ပထမဆုံး အက်စ်ဝမ်းဆိုတဲ့လူက ကျုပ်တို့ကို အတိအလင်းကြေညာသွားတာ ခံရဖူးတယ်။
(၈၈) မှာ ၀န်ထမ်းတွေက စက်ရုံတွေ၊ ရုံးဌာနတွေ၊ လမ်းတွေပိတ်၊ ရပ်ဆိုင်းသွားစေခဲ့ပေမယ့် ရုံးပြန်မတက်ရင် အလုပ်ဖြုတ်မယ်ဆိုတဲ့ ရာဇသံကြောင့် ၀န်ထမ်းတွေ အလုပ်ပြန်ဆင်းခဲ့လို့ ဒင်းတို့ရဲ့ အုပ်ချုပ်ရေး ယန္တရား ပြန်လည်ပတ်ခဲ့တယ်ဆိုတာ ဒင်းတို့ ကောင်းကောင်းမှတ်ယူခဲ့တာ အခုထိပါပဲ။
ဒီလိုမှတ်ယူခဲ့တာမို့ လှိုဏ်ခေါင်းတွေထဲက တာလီဘန်တွေ ပြေးစရာမြေမရှိတော့တဲ့ ဇာတ်လမ်း၊ ကမ္ဘာဇာတ်ခုံပေါ် မှာ မြင်တွေ့လာရတော့ ဒင်းတို့ ကြပ်ပြေးကိုကြိုပြေးခဲ့ပြီ။ သည့်နောက်မှာ ဒင်းတို့ရဲ့ အုပ်ချုပ်ရေး ယန္တရားလည်ပတ် ဖို့နဲ့ ရန်ကုန်ကလူထုနဲ့ ခွဲအုပ်ချုပ်ဖို့ ကျုပ်တို့ကို ရန်ကုန်ကနေ ကြပ်ပြေးကို အပါခေါ်ခဲ့တာမှန်း ကျုပ်တို့အားလုံး သိခဲ့ကြပေမယ့် အခုအခါမှာတော့ ကျုပ်တို့ဘ၀ ကြပ်ပြေးကြက်ခြင်းထဲက ကြက်တွေလိုဖြစ်နေပြီလို့ ပြောရင် ကျုပ်တို့က လက်ခံရမှာပါ။
ကြည့်ပါလား၊ ဒီကားကိုပဲစီး၊ ဒီလမ်းအတိုင်းသွား၊ ဒီရုံးကိုတက်၊ ဒီအချိန်မှ ရုံးဆင်း၊ ဒီအဆောင်ကိုပြန်၊ ဒီနေ့မှာ ချီတက်ရမယ်။ ပိာုနေ့မှာထောက်ခံပွဲလာကြ၊ ဒီနေ့ကျ အလေးလာပြုနဲ့ ပြုသမျှနုနေခဲ့ကြရတာ။ ဒါတင်မက ဒီကာလမှာ စောစောထလမ်းလျှောက်ကြ၊ လက်မြှောက်ကြ၊ ထိုင်ကြထကြရ။ ဒီရက်တွေမှာတော့ ပိာုဘုရားပွဲကြီးကို မလာမနေရ၊ ဒီရက်ကျတော့ ဆန္ဒမဲတွေ ကြိုပေးလေကွာ၊ မပေးတဲ့သူစာရင်း ၀န်မင်းကြီးဆီတင်လိုက်မယ်။ မနားတမ်း၊ အားစမ်းခံခဲ့ရတဲ့ ကျုပ်တို့ရဲ့ကျွန်ဘ၀တွေ ကုန်လွန်ခဲ့တာ (၃) နှစ်ကာလထဲပဲ ရောက်ခဲ့ပြီ။
ရန်ကုန်ကနေ အပါခေါ်လာခဲ့တဲ့ ၀န်ထမ်းများ၊ အခုကြပ်ပြေးမှာ၊ ငါတို့ ခိုင်းတာလုပ်ကြစမ်း၊ ငါတို့ရဲ့အစီအမံက ဒီလို မင်းတို့သိအောင်ပြောမယ်။ မင်းတို့နိုင်ငံရေးအမြင်မရှိရင်၊ မဖွယ်မရာလုပ်ရင် စည်းရုံးရေးပျက်နိုင်တယ်၊ အခုအချိန် ပာာ ငါတို့အတွက် အရေးအကြီးဆုံးအချိန်၊ မင်းတို့က ငါတို့အစိုးရနဲ့ ပြည်သူအကြား ပေါင်းကူးတံတားကွ။ မင်းတို့ရဲ့ လုပ်ဆောင်မှု အမှားအမှန်၊ အကောင်းအဆိုး၊ တရားမျှတမှု ရှိမရှိ ဆိုတာတွေက ငါတို့ အစိုးရကို ရောင်ပြန်ပာပ်လို့ မင်းတို့ရဲ့ မမှန်မကန် ပြုကျင့်မှု၊ ပြည်သူတွေအပေါ် နိုင်ထက်ကလူနှိပ်စက်မှု၊ မောက်မောက်မာမာဆက်ဆံမှု၊ ဒီလောက် လစာတွေ တိုးပေးပြီ အခွင့်အရေးတွေ ပေးထားပါလျက် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုတွေကြောင့် ငါတို့အစိုးရအပေါ် ပြည်သူတွေက မုန်းတီးငြိုငြင်နိုင်တယ်ဆိုတာ နားမလည်ဘူးလား။ ငါတို့အစိုးရက clean government ကွ။ ပြည်သူအားလုံး အားကိုးယုံကြည် ချစ်ခင်လေးစားတဲ့ အစိုးရကွလို့ ၂၀၀၉ ခုနှစ် မတ်လအတွင်း ဒင်းတို့ရဲ့ ကက်ဘိနက်က ထွက်လာတဲ့စကားတွေကြောင့် သူခိုးကလူပာစ်၊ သူညစ်ပတ်တွေက အောင်လံထူပြ နေပါလားဆိုတာ အခြားမရှိ အများသိပဲလေ။
အခုလည်း ရွေးကောက်ပွဲကြီး ၂၀၁၀ မှာ မြည်းကြည့်လိုက်မယ်။ ဆားငန်ရင်ရေရောမယ်၊ ဆားပေါ့ရင် ထပ်ခပ်မယ်၊ စားကောင်းရင် လွေးမယ်၊ စားမကောင်းရင် သွန်ပစ်မယ်။
ဒီလိုသဘောကို ကျုပ်တို့က ဘာလို့ကြိုသိနေသလဲ မေးရင် ဒင်းတို့ ဝန်မင်းကြီးတွေ၊ ကြပ်ပြေးမှာသွားတာ၊ လာတာ၊ ပြောတာ၊ ဆိုတာတွေကို ကြားနာကြည့်ရင် သိမြင်နိုင်တာပဲ။ ၀န်မင်းကြီးတို့က တပတ် (၇) ရက်မှာ (၃) ရက်တည်း ကြပ်ပြေးနေပြည်တော်မှာ နန်းထိုင်ကြတာ။
အဲဒီ (၃) ရက်မှာ ပထမရက်က နိုင်ငံတော် လုံခြုံရေးအစည်းအဝေး၊ ဒုတိယရက်က ကြံ့ဖွံ့အမှုဆောင်တွေ၊ အတွင်းရေးမှူးတွေ၊ နာယကတွေရဲ့ အစည်းအဝေး၊ ဒါက နိုင်ငံရေးအစည်းအဝေးလို့ ခေါ်ရင်ရတယ်။ နောက်တရက်ကျတော့ နိုင်ငံအရေး၊ ဌာနအရေး ဆွေးနွေး၊ ဝေးလေးလေးကက်ဘိနက် အဲဒီကက်ဘိနက်ပြီးရင် ၀န်မင်းကြီးဌာနတွေမှာ အီးစီလို့ ခေါ်တဲ့ ကက်ဘိနက်ရဲ့ အစည်းအဝေး အတိမ်အနက်ဆုံးဖြတ်တဲ့အချက်ပေါ် မူတည်ပြီး လုပ်တဲ့အစည်းအဝေး။
ဒီအစည်းအဝေးအပြီး ဒင်းတိုက ကက (ကြည်း) ရုံးကို ခရီးစဉ်တွေတင်ပြီး နိုင်ငံရေး၊ စည်းရုံးရေး၊ ရွေးကောက်ပွဲ စည်းရုံးရေးခရီးတွေ ကွင်းဆင်းကြပြီ။ တောင်ဘက်အရပ်သွားတဲ့ ၀န်မင်းကြီး၊ မြောက်ဘက်အရပ်သွားတဲ့ ၀န်မင်းကြီး၊ အောက်ပြည်ဆင်းတဲ့ ၀န်မင်းကြီး၊ အညာအရပ် တက်တဲ့ ခပ်ကဲကဲနာမည်ကျော်ဝန်မင်းကြီး၊ အသီးသီးအလျှိုလျှို သွားကြလာကြတဲ့ ခရီးစဉ်တွေဖော်ပြတဲ့အခါ ၀န်မင်းကြီးကတော်တို့ စံပျော်ရာ ရန်ကုန်မပာာကို ပြန်ကြတဲ့ခရီးကိုတော့ အမြဲမြှုပ်ချန်ထားခဲ့ကြတဲ့ တကယ့်အာဂကောင်တွေ။
ယာဉ်တန်းနဲ့ အမြန်လမ်းကတမျိုး၊ ကြပ်ပြေးလေဆိပ်ကနေ ရွှေဖိတ် အရောင်ယူနီဖောင်းဝတ်သွားတာကတဖုံနဲ့ သူတို့အခေါ် အဘဆိုသူတွေက အမျိုးမျိုးအဖုံဖုံ ဇာတိမြေတွေအရောက် အတင့်ရဲရဲ ရွေးကောက်ပွဲ စည်းရုံးရေးဆင်း တာကို သတင်းထဲမှာကတော့ ဌာနလုပ်ငန်းတွေ၊ စီမံကိန်းတွေ၊ စက်ရုံတွေ စစ်ဆေးတာလို့ ဖော်ပြတာ မရှက်တာက ဒင်းတို့။ ဒါကလည်း အပတ်စဉ်လုပ်နေကျလုပ်ငန်း။
ကျုပ်တို့အလုပ်သမားတွေ ၀န်ထမ်းတွေရဲ့ အခြေခံအခွင့်အရေး၊ ၀န်ထမ်းစည်းမျဉ်း စည်းကမ်းလက်စွဲဥပဒေတွေ၊ စက်ရုံအလုပ်သမားတွေရဲ့ ဖန်ဒယ်မင်တယ်လ်ရူးလ်စ်တွေ ဖက်ထရီ အက်ဆိုတာတွေလည်း ပျက်ခဲ့တာကြာခဲ့ပြီမို့ စာအုပ်၊ စာရွက် ဖိုင်တွေထဲမှာ မှိုတက်ခြကိုက်ခဲ့ပြီ။
အောက်ခြေ၀န်ထမ်းတွေအတွက် ဘယ်သူကလာပြီး ဘယ်သူက လမ်းပြနိုင်တာ မရှိခဲ့တာလည်း ကြာပြီပဲ။ ကင်ပေတိုင်လို အုပ်ချုပ်သူတွေရဲ့ ပြုသမျှနုခဲ့ကြရတဲ့ ကြောက်ဒူးတုန် ဒီဝန်ထမ်းအများစု စိတ်ထဲမှာ ကြိတ်ခဲပြီး ခံနေခဲ့တဲ့ ကာလရှည်ကြာလာတော့ ခံရမှန်းတောင် မသိတော့တဲ့၊ ကျွန်ဘ၀ ရောက်တာဘာဆန်းသလဲ။ ဌာနတွေမှာ ဒင်းတို့ လုပ်သမျှ၊ အုပ်ချုပ်သမျှ အမြဲကြောက်ဒူးတုန်ကြ၊ ပြောသမျှဆိုသမျှ ပာုတ်ကဲ့ခင်ဗျ၊ စားကြွင်းစားကျန်ချန်ပေးတဲ့ မ၀ရေစာက ဒါမှ အာပာာရလို့ထင်တဲ့ သူကများမှများ။
ခဏခဏ အဘအဘလို့ ခေါ်တဲ့ ငတတွေကလည်း ပေါများတော့ ဒင်းတို့ ရဲ့ စိတ်ထဲမှာက ကျုပ်တို့ကို ကြက်ခြင်းထဲက ကြက်တွေလိုသဘောထား။ ဘယ်အချိန်ရိုက်စားစား ရတယ်မပာုတ်လားလို့ ထင်နေတာလည်း ဘာထပ်ပြီးဆန်းဦးမှာလဲ။ ဒီအင်အားတွေအခြေခံပြီး ဒင်းတို့က၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဆန္ဒခံယူပွဲတုန်းကလို နွှဲကြဦးမယ်ဆိုတော့……
နေပြည်တော် ကြပ်ပြေးကြက်ခြင်းထဲက ကြက်ဘယ်အတက်နဲ့ ခွပ်ပြီး ဘယ်ရက်မှတွန်ကြမှာလဲ။